Iyala ukuya ejokweni ngokugonywa ngeyasentshonalanga - Bayede News
Yize bukhona ubuhle kepha bukhona nobufakazi bokuthi ukugoma lokhu kuyaba yimbubhiso futhi kulibhizinisi
Unyaka esikuwo uyongena emlandweni njengonyaka wokhuvethe. Abayobe besho njalo yingoba bazobe bebuke umonakalo owenziwe yilesi sifo kubantu nasemazweni amaningi. Isifo lesi asigcinanga ngokudlavuza abantu kepha senze ezibukwayo uma kufikwa kwezomnotho. Khona lapho phezu kokuthi ‘ulinganise’ abantu njengoba ubudla nxa zonke ungakhethi, kukhona nokunye okwenzekile. Ukungathembani kube kuningi kanti muva nje lokhu kusobala okwempahla yembuzi. Lokhu kungathembani kumayelana nemishanguzo yokubhekana nalesi sifo.
Ukungathembani kuqale kososayensi bamazwe njengoba bezidlana imilala kwazise olithole kuqala ikhambi kusho ukuthi kuzolalelwa yena kanti izwe lelo ikhambi elitholakele kulo liyoceba. Kuqale amaRashiya athi kukhona okuqhamukayo, eza namaShayina.
Babona abase-USA nase-Europe ubungozi bokweqelwa zimbangi zabo, nabo bavela. Inkampani yase-USA ibe ngeyokuqala ukuveza ukuthi ucwaningo lwayo lube nemiphumela. Lokhu kuthokozise abaningi emhlabeni ikakhulu khona e-USA lapho ukhuvethe lucoboshisa khona.
Nokho lezi zindaba ezimnandi azithokozelwanga yibo bonke abantu njengoba kwabanye kube nokusola ukuthi ukusatshalaliswa kwemishanguzo kungahle kusho ukufa nenzuzo kongxiwankulu. Umndeni obukhonjwa ngenjumbane ngalokhu ngowakwaGates, noholwa yinjinga uMnu uBill Gates. Lo mndeni ngenhlangano yawo yosizo, umile ekutheni imishanguzo le izoba yisixazululo.
Kule mpelasonto amaNgisi agcwale imigwaqo ephikisana nokuba kugonywe abantu. Ngaphansi kwesiqubulo esithi: ‘Unite For Freedom – Time For Action’, inhlangano iSave Our Rights UK ihole izinkulungwane zabantu ezitaladini zaseLondon. Nalapha eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana ezokuxhumana zigcwele imiyalezo exwayisa ngokugonywa. Abanye baze baliphimise elokuthi ukugonywa lokhu yitulo lokwenza ama-Afrika omantindane, bathi kungcono isifo kunokugonywa.
Ushaye ungqimphothwe esehlele ukuvala izwe ngePhasika uMerkel
Omunye uzozibuza ukuthi kungani abantu benqaba usizo ngoba kusobala ukuthi bayafa? Umlando wokugonywa nokuhlinzekwa ngemishanguzo mude kanti futhi unobuhle nobubi. Uba muhle uma abantu besinda ezifweni kepha kwamanye amazwe e-Afrika, e-India nakwamanye ampofu akhele ezifundeni eziseningizimu kwabonwa lukhulu. Lapha ipolitiki yesimomazwe kanye nobugovu bososayensi kwacekela phansi impilo yabantu, abanye emuva kokudla imishanguzo baphenduka izinkubela abanye bafa. E-India naseChina kwaze kwavela ngisho nobufakazi bokuthi ukugonywa lokhu kwasetshenziswa ngabasentshonalanga ukuthena abantu.
Khona lapho akukho ukungabaza ukuthi ukugoma lokhu kulibhizinisi elikhulu. Yikho kukhona ngisho izinkulumo zokuthi ukutholakala kwekhambi kuyoqala kuzuzise abasentshonalanga kuthi uma sebeqedile bese imvuthu yabelwa amazwe ampofu. INingizimu Afrika kanye ne-Afrika ngaphansi koholo lukaMengameli uRamaphosa bazama ukwenza okungakaze kwenziwe, ukuqinisekisa ukuthi kulokhu i-Afrika ayibi ngeyokugcina.
Lapha nje eNingizimu Afrika kuyavela ukuthi kukhona ososayensi abangazibekile phansi emizamweni yokuqhamuka namakhathakhathana. Uma lokhu kube yimpumelelo kuyosho lukhulu emnothweni kanye nasekuqhakambiseni ososayensi bakuleli lizwekazi.
nguMfo waKwaNomajalimane Dec 4, 2020